Sign - Bomụ nwoke Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Sign nkezi 4.7 / 5 si 47
NA / A, o nwere ihe nlere 72.7K
Adult, Lovemụ nwoke Lovehụnanya, Comedy, na-atọ ọchị, Drama, fantasy, Manhwa, Otu gbara, romance, Ndụ akwụkwọ, Oberibe Ndụ, Smut, Webtoons, Yaoi
E nwere ihe ole na ole pụrụ iche banyere «Cafe Go Yo». Nke mbu, kọfị ha na-amị Manga Asụsụ Ogbi. Nọmba abụọ, ndị ahịa ha anaghị enye iwu maka menu. Na nọmba atọ, Go Yo, onye na-elekọta cafe, ntị chiri.
Ya mere, mgbe Soo Hwa sonyere dị ka oge, ọ bụ ezie na a naghị atụ anya ka ọ mụta otu esi eme kọfị dị mma, a gwara ya ka ọ gbasaa okwu ya n'asụsụ ogbi karịa okwu ndị a: «elu», «ụgwọ» na «biko».
Mana mgbe Go Yo na-enye ya ịmụrụ ya ihe ọmụmụ, Soo Hwa na-ala azụ. Ọ bụghị n'ihi na ọ chọghị ịmụ ihe, mana n'ihi na o nwere oge «siri ike» na Go Yo. Dị ka, n'ụzọ nkịtị. Ọ na-esi ike. Mgbe obula ohuru olu miri emi nke Go Yo.
Gụọ ọhụụ kachasị ọhụrụ, webtoons adịchaghị, naanị anime yaoi